China Cotton-kufanana Fluffy Agent fekitori uye vagadziri | Taiyang
Tsvuku tsvuku remover
Kufunga osmotic / penetrati ...
Ruvara rwepamusoro soro fi ...
Acid enzyme mhinduro
Pamba-senge Fluffy Mumiriri
Nomenclature: Pamba-senge Fluffy Mumiriri
Yakasarudzika polysiloxane silicone polymer
Pamba-senge Fluffy Mumiriri imhando yechibatiso chakawanda chekupedzisa kupedzisa chichangobva kugadzirwa neTY TexChem. Iyo inopenya nzvimbo yechigadzirwa ichi ndeyokuita kuti mucheka wapera uve wakasviba, wakapfava, ukobvu, wakakurisa, hauna ruvara, hapana shanduko-rwemavara, uye nekushambidza kwemvura, kupisa kwakanyanya kupisa, asidhi uye alkali kuramba electrolyte, shear kuramba. Kunyanya iyo yakagadziridzwa kune inozivikanwa yekuzivikanwa kwe jeans, ita machira acho fluffy, akapfava uye anodhirowa.
Chitarisiko: Milky chena chinwiwa
Ionic Kwakasikwa: Asina simba cation
Solubility: Soluble mumvura
Ruzivo / Imba:
1. Inotsigira mucheka wacho ne fluffy, yakapfava, yakakurumbira elastic, yakakora uye dhiraini dhizaini, uye iyo simba rekubvarura kwemachira rinogona kuvandudzwa, uye zvinonyanya kuratidza fluffy mhedzisiro yema denim machira.
2. Ichi chigadzirwa chiri nyore kushandisa, chiri nyore kushanda, kusimba kwakasimba, kupisa kwakanyanya kupisa, asidhi uye alkali electrolyte, shear-kuramba, hapana stratification, hapana zviitiko - sekunge kunamatira kune roller, kunamatira silinda, kuyambuka, kuderedzwa.
3. Uine hydrophilic chivakwa, pinda mukati memucheka, shandura dhizaini yemuti, gadzira mucheka fluffy softer.
4. Green uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, haina NPEO / APEO, inoenderana nechikumbiro chekuchengetedza kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muEurope neAmerica.
* Kudhiza fekitari: Kupedzisa machira, polyester, denim;
* Kugeza chirimwa: Denim, yekushambidza mvura, yekutsvaira, nezvimwewo, fluffy, yakapfava uye yakakora kupera;
* Kukupa chigayo: Yakagadzirwa jira rinogona kuve rakapfava uye rakapfava kuitira kuti mucheka unogona kukweverwa kune hunodiwa uye kwete kuremara nyore.
* Towel fekitori: Iyo tauro yakapedza yakazara, yakazara uye yakasimba uye yakapfava.
Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa zvakananga kupatsanurwa kuita maviri kana matatu, zvinoenderana nezvinodiwa mumucheka uye sarudzo yevatengi yedhidhi yakakodzera.
Kudhiza Nzira: 1-5% （owf
Pad-batch Maitiro: 10-50g / L single-dip-single nip padding kana kaviri-dip-kaviri nip padding.
125KG kana 50KG / barre
Hafu yepfupa: mwedzi mitanhatu
Yepfuura: Anti-inomira mumiririri (Textile Agent yeAnti-Slip / Drift / Migration)
Inotevera: Bleaching mumiririri
Nguruve & Kudhinda
Kumiririra mumiririri pakudziya kwakanyanya
Acid Colour Fixing (Fixative) Mumiriri
Kurera uremu Mumiriri
Anti-elasticity uye anti-dzorera kudzoreredza dhayi p ...